PCB ရှေ့ပြေးပုံစံ - KingSong PCB နည်းပညာ, Ltd
LED မီး PCB
metal core ကို PCB
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် FPC ဘုတ်အဖွဲ့
တင်းကျပ် Flex ကို PCB
မျက်စိကန်း & သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံ VIAS PCB
PCB Layout ဒီဇိုင်း
မီး PCB ညီလာခံ
မော်တော်ကား PCB ညီလာခံ
PCB ဆက်သွယ် အစည်းအဝေး
FPC / Flex ကို-တင်းကျပ် PCB
Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့
သတ္တု Core PCB
လူပျို & နှစ်ချက်အလွှာ PCB
Smt & PCB ညီလာခံ
တင်းကျပ် PCB စွမ်းဆောင်ရည်
သတ္တု PCB စွမ်းဆောင်ရည်
Flex ကို PCB စွမ်းဆောင်ရည်
PCB Prototype applications we offer include：
System ကိုနှစ်မြှုပ်ထားသောအရာများ၏အင်တာနက်ကို, ဂစ်တာအီလက်ထရွန်းနစ်, အော်ဒီယိုနှင့်ဗွီဒီယိုကိရိယာ, တိုင်းတာခြင်းစနစ်များ, နာယက, ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ကောက်ဝတ်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, အော်ဒီယိုနှင့်ဗွီဒီယိုကိရိယာ, ရုပ်မြင်သံကြား, ဂစ်တာအီလက်ထရွန်းနစ်, Calculator ကို, ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများကို, မူလစာမျက်နှာနှိုးစက်စနစ်များ, အိမ်ရာအီလက်ထရွန်နစ်, အအေးခံခြင်းနှင့်လျှော်စက် , တီဗီ Converter Box ကို, ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့ analog Switching, အဝေးမှထိန်းချုပ်အီလက်ထရောနစ်ကစားစရာ, disk Drive ကိုပုံတူစနစ်များ, LOJACK အလိုအလျောက်ပြန်လည်နာလန်ထူစနစ်, အီလက်ထရောနစ်ရုပ်မြင်သံကြားပရိသတ်အတိုင်းအတာစနစ်များမိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း, မိုက်ခရိုဝေ့ transceiver, ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း (RF) စနစ်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ကွန်ယက်ပစ္စည်းကိရိယာ, transceiver, အသံ နှင့် Vision ၏အသံလွှင့်, ဆဲလ်တယ်လီဖုန်း Relay စခန်းများ, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်မိုဘိုင်းမာလ်တီမီဒီယာဂီယာ, Walkie Talkie အတိုင်း, ပင်မ Control Panel ထဲက, Monitor, CCTV ထုတ်ကုန်ပေးပို့စနစ်များ, Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးထုတ်ကုန်များ, Oscilloscopes, ကွန်ယက်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, မီတာ, strain gauge, Spectrum Analyzer, ပါဝါထောက်ပံ့ရေး, စက်မှု AC Power ပြောင်းပြန်လှန်, Switcher ကို power supply, ရေတပ်စနစ်များ, IFF transponders, IR dete မှစက်ရုပ်, DC က ctors, မီးသတ်ထိန်းချုပ်ရေးဆားကစ်, ဂြိုဟ်တုကိုရေကြောင်းကိရိယာ, ဂြိုဟ်တုစနစ်များ, ထိန်းချုပ်မှုစနစ်, မော်တော်ကားစက်နှိုးထိန်းချုပ်မှုများ, Access ကိုမီဒီယာ, Aeronautics, ထုတ်လွှတ်မှုစောင့်ကြည့်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှု, ရာသီဥတုထိန်းချုပ်မှု, Dash ရှိ Instrumentation, ခရီးသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ, အင်ဂျင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ, မော်တော်ကားထိန်းချုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ, နှလုံးမော်နီတာ ဒါပေါ် Dialysis စက်, လူနာစောင့်ကြည့်မှု, implants ကိရိယာစက်ရုပ်ခွဲစိတ်စနစ်များနှင့်။
အဆိုပါ Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့ (PCB) according to the number of layers is divided into Single Sided PCB，Double Sided PCBနှင့် Multi-layer PCB etc.
For Exmple：Double Sided PCB
နှစ်ချက်တဖက်သတ် PCB ကိုလည်းနှစ်ဆအလွှာ PCB ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်များတွင်အသုံးများနှင့်အရေးကြီးသောအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ချက်ခြမ်း PCB တစ်ခုတည်းခြမ်း circuit ကိုမလုံလောကျသညျ့အခါကဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းကိုသွားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တစ်ခုတည်းတဖက်သတ် PCB ၏ extension တခုဖြစ်တယ်။ နှစ်ဦးစလုံးနှစ်ဖက်ပေါ်ဆားကစ်ရှိပါတယ်။ နှစ်ချက်အလွှာ PCB ဘုတ်အဖွဲ့ PTH VIAS နှငျ့အတူရှိ၏။ ရိုးရှင်းစွာအပြောကို double တဖက်သတ် PCB ဘုတ်အဖွဲ့နှစ်ခုတဖက်သတ်ခြေရာတွေ, အပေါ်ဆုံးအလွှာများနှင့်အောက်ခြေအလွှာနှငျ့အတူရှိ၏။
ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်နှစ်ဆတဖက်သတ်လုပ်ဘယ်လိုနေသလဲ? နှစ်ဆတဖက်သတ် PCB ဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါသည်:
KingSong Technology specialized in providing single sided pcb，double sided PCB and Multi-layer PCB manufacturing services more than 10 years. We could offer very competitive price both for PCB prototype and Mass production.
A: DHL, UPS, Fedex, TNT စသည်တို့ကိုအားဖြင့်
B ကို: ပင်လယ်အားဖြင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အရေအတွက်များအတွက်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်။
PCB သို့မဟုတ် PCBA ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် quotation အ Get
မည်ဟုယုံမှားခြင်းဖြစ်စေရန်, လုံလောက်အကြီးစား Be!
PCB ၏ Peak ရာသီမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
Yongzheng အဆောက်အအုံ, Fuyong, ရှန်ကျန်း 518103 တရုတ်